Posted by သက်ဝေ at 2:15 AM
khet myint myint November 5, 2010 at 2:23 AM
လောလောဆယ်တော့ ပုံရိပ်ဟောင်း အတိတ်ဟောင်း ဘယ်တော့မှမရိုးနိုင်မယ့် နားစွဲနေကြ သီချင်းဟောင်းတွေဆီ ပြန်လှည့်လို့နေနေမိတယ် ။
khin oo may November 5, 2010 at 2:31 AM
ဟင်း. ခမမ ဆီပါသွားပြန်ဘီ.
Sunny November 5, 2010 at 3:55 AM
ပုံရိပ်ဟောင်းများသည် အမှတ်တမဲ့မှ အမှတ်တရများဖြစ်သည်.. :)
TZA November 5, 2010 at 11:57 AM
ခွင့်လွှတ်နော် ကာဗာကို လုံးဝ လုံးဝ လုံးဝ မှတ်မိတယ်၊ ကျနော့်ရဲ့ ကလေးဘဝနေ့ရက်ပေါင်းများစွာထဲက ကွက်လပ်ပေါင်းများစွာကို ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တဲ့ အခွေကာဗာလေးပေါ့ဗျာ (အသံများတုန်ခါသွား)
MrDBA November 5, 2010 at 12:02 PM
ကျွန်တော်လဲ တစ်ပုဒ်ဆိုထားတာ ရှိတယ်ဗျ။ မတွေ့လိုက်ဘူးလား ... ဟီးဟီး။
MrDBA November 5, 2010 at 12:03 PM
ဟားဟား ..သင်ဇာအေး ပြောသလိုဘဲ။ ကျွန်တော်လဲ ငယ်ငယ်တုန်းက ခဏခဏနားထောင်ဖြစ်တယ်။ တူးတူးသီချင်းတွေနားထောင်လိုက် ဟေမာသီချင်းတွေနားထောင်လိုက်နဲ့ ပျော်စရာတွေပါဗျာ။
ZT November 5, 2010 at 12:07 PM
ဒီမှာ အိပ်မရတာ ဘာကြောင့်လဲ။ ဒီမှာ အိပ်မရတာ အချစ်ကြောင့်ပေါ့ကွယ်။
အဲဒါက "ယုံလား" ထဲက မဟုတ်လား။ :)
Kay November 5, 2010 at 1:44 PM
သြော..မသက်ဝေ ဆိုတာ.. မေဆွိ နဲ့..ဟေမာနေ၀င်း ကြားက.. ရုပ်ကလေး ဖြစ်မယ် လို့..မှန်းကြည့်သွားလိုက်တယ်။း)
TURN-ON-IDEAS November 5, 2010 at 2:12 PM
"အစ်မသက်ဝေတို့ခေတ်ကYIT"ကိုလဲ ပုံရိပ်ဟောင်းအဖြစ် အသက်သွင်းပါအုံးဗျာ...
ညီမလေး November 5, 2010 at 5:27 PM
ပုံရိပ်ဟောင်းတွေ ကိုပြန်ကြည့်ရရင် အတိတ်တွေက လွမ်းစရာ...
အချိန်တွေက မြန်သလိုပဲ မရယ်.........
T T Sweet November 5, 2010 at 8:58 PM
အဲဒီသီချင်းတွေ ပြန်ကြည့်ပြီး ငယ်မူပြန်ပြန်နေတာ။ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ထင်နေတာ။ ဟားဟား ... ဘ၀တူတွေတွေ့ပြီ။ အန်တီသက်ဝေ ကတ်စေးနဲ။ သူ့ပုံပါတဲ့ ပုံရိပ်ဟောင်းတွေကျ မတင်ပဲနဲ့ ဟွန့်။
တီတီသက်ဝေက အဲ့ဒီခေတ်ကလား။ :)))
Moe Cho Thinn November 6, 2010 at 11:56 AM
TZA အသံက နဂိုကတည်းက တုန်နေတာ မဟုတ်ဘူးလားးး အသက်ကြီးရင် ဒီလိုပဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ :)
Ko Paw November 7, 2010 at 11:43 AM
ပုံရိပ်ဟောင်းများကို ဖတ်ပြီးသကာလ အနှစ် ၂၀ စာ ငယ်မူပြန်သွားပါသည်။
အင်ကြင်းသန့် November 7, 2010 at 5:59 PM
မမ...ဂျင်းလည်း အဲဒီအချိန်တွေတုန်းက တကယ့်ကိုအသက်ငယ်ငယ်လေးပဲရှိခဲ့ပေမယ့် TVမှာ လွှင့်ပေးတတ်တဲ့သူတို့ရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို စွဲနေတုန်းပဲ။ အခုထိလည်း Youtubeမှာစိတ်ကူးပေါက်ရင်ပေါက်သလိုပြန်ရှာပြီး နားထောင်ဖြစ်တယ်။း)
မိုးငွေ့...... November 10, 2010 at 11:22 AM
ဟေမာနေ၀င်းဒီဇိုင်းကိုသိပ်ကြိုက်တာ အဲဒီတုန်းက ညီမလေးတို့ ခုနှစ်တန်း ရှစ်တန်းပဲရှိသေးတယ်...ဟေမာနေ၀င်းဆံပင်ပုံဆိုပြီး အရှေ့အတိုနဲ့အနောက်ခပ်ကုတ်ကုတ်ပုံစံလေးကို လိုက်ညှပ်ကြသေးတယ်...။ အဲဒီတုန်းကအချိန်တွေကိုလွမ်းတယ်...။
စုချစ် November 10, 2010 at 8:51 PM
အမသက်ဝေ ငယ်ငယ်က ပုံရိပ်ဟောင်းတွေ ကြည့်ချင်ပါတယ်...
ဇွန်မိုးစက် November 17, 2010 at 1:36 PM
ညီမလည်း အဲဒီအချိန်တုန်းက ငယ်ပေမယ့် တီဗွီမှာ မေဆွိရဲ့ အိပ်ဆေးမရှိတို့၊ ခင်မောင်ထူးရဲ့ မောင့်ဆေးကျောင်းသူသီချင်းတို့လာရင် မလွတ်တမ်းကြည့်တာ။ တူနှစ်ကိုယ်တိုင်းပြည်အခွေလည်း အိမ်မှာရှိတယ်။ အဲဒီ့တုန်းက ဇွန်က ၄၊ ၅ နှစ်လောက်ပဲ ရှိဦးမယ်။
ဟေမာနေ၀င်းခေတ်မှာ နဲနဲကြီးလာပြီ။ ဖေဖေက ညီမကြိုက်မှန်းသိလို့ ထွက်သမျှခွေအကုန်ဝယ်ပေးတယ်။ ခွင့်လွှတ်နော် အခွေက သီချင်းတွေ တစ်ပုဒ်မကျန် အလွတ်ရတဲ့အထိ ဆိုခဲ့သေးတယ်။ သီချင်းတွေလိုက်ဆို၊ သူ့ဆံပင်ပုံစံလိုက်ညှပ်။ သူ့ပုံပါတဲ့ ပြက္ခဒိန်မှန်သမျှတွေဝယ်ပြီး အိမ်မှာချိတ်ထားလိုက်သေးတယ်။ သူဝတ်သမျှ အကျီင်္ပုံစံတွေလိုက်ကြည့်ပြီး ချုပ်ဝတ်ချင်သေးတာ။ ကိုယ်က ငယ်နေလို့သာ။ :D အဲ့လောက်ထိ ဟေမာ့ကို ရူးသွပ်ဖူးပါတယ် အမရေ။
ရေးရင်းနဲ့ ပုံရိပ်ဟောင်းများကို လွမ်းသွားပြီ။
ချစ်မသက်ဝေရဲ့ ကျောင်းတော်က ပုံရိပ်ဟောင်းများကိုလည်း ဖတ်ချင်ပါတယ်နော်။